Sales - Executive Archives - Page2of5- Glory Assumption Space
Sales Executive – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales Executive – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ •	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည်။ •	Car Showroom တွင် Sales Exevutive ဖြင့်လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ •	Engineering Background ရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( ၈:၃၀ - ၅:၃၀ ) •	တနင်္ဂနွေ၊ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်နှင့် စနေအလည်နှစ်ပက်ပိတ်သည်/ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Executive – Male/Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လသာမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ချက်ချင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.	Sales Executive – Male/Female (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / လသာမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ •	သင်္ဘောလိုင်းကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ခဲ့ဖူးသူဦးစားပေးမည်။ •	Freight Forwarding ၊ သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( 9:00 AM – 5:00PM) •	ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ •	မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No – 09 263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101 , 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Senior Sales Executive – Male (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ကျပ် ( ညှိနှိုင်း) သာကေတမြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS Company နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Senior Sales Executive – Male (5) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ကျပ် ( ညှိနှိုင်း) သာကေတမြို့ နယ်။ - တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ တစ်ခုခုရရမည်။ - အသက် (၃၀)နှစ် ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - English ရရမည်။ - Computer ရရမည်။ - FMCG Sale Executive လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ - ဘာသာခြားကုမ္ပဏီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784. Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။)
Sales Executive – Male/Female - (5) Posts/လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Promotion Item များကို Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ၁) Sales Executive – Male/Female - (5) Posts/လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ - ၄၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်အောက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Sales ပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်အထက်ရှိ သူဖြစ်ရမည်။B2B ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးအများနှင့်လိုက်လျော ညီထွေ စွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အင်္ဂလိပ်စာအသင့်အတင့်နားလည်အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - ကွန်ပျူတာ (Microsoft Word, Excel, Power Point, Email) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Executive - Male / Female - (5) Posts - လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - မန္တလေးမြို့ ။
GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် --- ၁) Sales Executive - Male / Female - (5) Posts - လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - မန္တလေးမြို့ ။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ - အသက် ( ၃၅ ) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် ။ - ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ လုပ်သက် အနည်းဆုံး ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည် ။ - အလုပ်ချိန် မနက် ( ၈ ) နာရီ မှ ညနေ ( ၅ ) နာရီ - စနေနေ့တ၀က် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်ပါသည် ။ - ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်သုံး Kitchen ပစ္စည်းများရောင်းချသည့် Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ -အင်တာဗျူးလျှင်ရန်ကုန်တွင် Interview ပါမည် ။ Job Description : - Sales Plan / Marketing Area များပြုလုပ်နိုင်ရမည် ။ - ရောင်းချပြီးသော နှင့် ရောင်းရန်ရှိ Clients များနှင့် ပတ်သက်၍ support ပေးရမည် ။ - Quotation များ နေ့ချင်းပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် ။ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည် ။ - Under Pressure တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည် ။ - Microsoft Office အသုံးပြုနိုင်ရမည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive - Male / Female - (7) Posts - လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - မြောက်ဥက္ကာလပမြို့နယ် ။
GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် --- ၁) Sales Executive - Male / Female - (7) Posts - လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - မြောက်ဥက္ကာလပမြို့နယ် ။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ - အသက် ( ၃၅ ) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည် ။ - ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆိုင်များတွင် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ လုပ်သက် အနည်းဆုံး ( ၁ ) နှစ်ရှိရမည် ။ - အလုပ်ချိန် မနက် ( ၈ ) နာရီ မှ ညနေ ( ၅ ) နာရီ - စနေနေ့တ၀က် ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်ပါသည် ။ - ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်သုံး Kitchen ပစ္စည်းများရောင်းချသည့် Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ Job Description : - Sales Plan / Marketing Area များပြုလုပ်နိုင်ရမည် ။ - ရောင်းချပြီးသော နှင့် ရောင်းရန်ရှိ Clients များနှင့် ပတ်သက်၍ support ပေးရမည် ။ - Quotation များ နေ့ချင်းပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည် ။ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည် ။ - Under Pressure တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည် ။ - Microsoft Office အသုံးပြုနိုင်ရမည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
1.Senior Sales Executive – M/F - (5) Posts / လစာ - လစာ- ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /မြောက်ဥက္ကလာမြို့ နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Senior Sales Executive – M/F - (5) Posts / လစာ - လစာ- ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /မြောက်ဥက္ကလာမြို့ နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - Senior Sales Executive အတွေ့ အကြုံ (၃) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - ကားလုပ်ငန်းပိုင်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - အလုပ်ချိန် (9:00 AM to 5:30 PM) - Ferry ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09 977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Executive – Female – (5) Posts/လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ ရန်ကင်းမြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Engineering Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ၁) Sales Executive – Female – (5) Posts/လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်/ ရန်ကင်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ - အိမ်ထောင်မရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၇) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - Computer သုံးနိုင်ရမည်။ English 4skill ပြောနိုင်ရမည်။ - တရုတ်ဘာသာစကားပြောနိုင်ရင်ဦးစားပေးမည်။ - လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရရုံးတွင်း၊ရုံးပြင်၊နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ - Team work ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ရမည်။ သွက်သွက် လက်လက်ရှိရမည်။ - Golden City တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုဝါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Executive – Female (5)Posts/လစာ - လစာ-၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ Promotion Item Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Executive – Female (5)Posts/လစာ - လစာ-၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် /တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် ၂၀ မှ ၃၀ နှစ်အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ - English စကားကို ရေးဖတ်ပြောကျွမ်းကျင်ရမည်။ - သွက်သွက်လက်လက်နှင့်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ - စနေ၊တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီခွဲအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Distribution Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.	Sales Executive – Male (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	Sales Executive ဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ •	English4Skill (Basic ) ပြောနိုင်ရမည်။ •	အသက် ( ၁၈ - ၃၅ )နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ •	တစ်ခါတစ်ရံလိုအပ်ပါက နယ်ခရီးထွက်နိုင်ရမည်။ •	ကားမောင်းတတ်ရမည်။ •	စားသောက်ကုန်၊လူသုံးကုန် ပိုင်းတွင် လုပ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် (9:00 AM – 5:00 PM ) •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Executive – Male - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricant Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Executive – Male - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ~ ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် / ကမာရွတ်မြို့နယ်။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • Lubricant ပိုင်းဖြင့်လုပ်သက် (၂)နှစ်​ ရှိရမည်။ • တခါတရံနယ်သွားနိုင်ရမည်။ • အင်ဂျင် 1500 CC မောင်းနိုင်ရမည်။ • Auto Manual မောင်းနိုင်ရမည်။ • ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ • Premium Brand ​ကို​ရောင်းနိုင်​ရမည်​။ • JD ပါတဲ့ cv form ကိုတင်ပေးပါရန်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Executive – Male /Female (5)Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တာမွေမြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ချက်ချင်းအင်တာဗျူး ၀င်ရမည်။ 1. Sales Executive – Male /Female (5)Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /တာမွေမြို့နယ်။
- အဝေးသင်ဖြင့်ကျောင်းဆက်မတက်သူများလျှောက်ထားနိုင် သည်။ - ကားမောင်းတတ်သူဦးစားပေးမည်။ - Construction ပစ္စည်းအရောင်း ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - စနေနေ့တ၀က်ပိတ်သည်။
Sales Executive – Female (5)Posts/လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ~ ၂၅၀,၀၀၀ကျပ်
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Media Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
1.Sales Executive – Female (5)Posts/လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ~ ၂၅၀,၀၀၀ကျပ်/ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်။
- Media ပိုင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။
- English စာအနည်းငယ်နားလည်ရမည်။
- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။
- Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
- ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။
- ပွဲရှိလျှင် အချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။
Sales Executive –Male/Female (5)Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်+%+++
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တာမွေမြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
1)Sales Executive –Male/Female (5)Posts/လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်+%+++/တာမွေမြို့နယ်။ - ၁၀ တန်းအောင် (သို့) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူများလျှောက် ထားနိုင်သည်။ - ကားမောင်းတတ်သူဦးစားပေးမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - Hotel သုံး Product များရောင်းရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင် ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sale Executive- Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sale Executive ( အိမ်သုတ်ဆေးနှင့်မြေသြဇာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရေးအတွက်)– Male (5)Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်+(နယ်နေစားငြိမ်း)+Phone Bill+ ခရီးစရိတ်+% /မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်။ -တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -သက်ဆိုင်ရာရာထူး နှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ -အဖွဲ့အစည်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာ ဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ပြီး သွက်လက်ချက်ချာပြီး အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ -ဧရာဝတီတိုင်း ၊ ပဲခူးတိုင်း တို့တွင်သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ -အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး (၃၀) နှစ်ထက်မကြီးသူဖြစ်ရပါမည်။ -အစမ်းခန့်ကာလရှိမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )